(Burma မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
• နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်
• သမ္မတစနစ် ပြန်လည်စတင်ခြင်း
$1,245 (အဆင့် - ၁၅၅)
မြန်မာနိုင်ငံ (တရားဝင်အားဖြင့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်)သည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ဧရိယာအားဖြင့် ဒုတိယ အကျယ်ဝန်းဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်နေ့တွင် ဂရိတ်ဗြိတိန်နိုင်ငံထံမှ (အင်္ဂလိပ်လို "Burma" အဖြစ်နှင့်) ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အဖြစ် လွတ်လပ်ရေးကို ရရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အဖြစ် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင် လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အဖြစ် ၁၉၈၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အဖြစ် ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇွန် ၁၈ ရက်တွင် လည်းကောင်း အမည်များပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အာဏာရစစ်အစိုးရအား အသိအမှတ် မပြုသော အဖွဲ့အစည်းများက ဘားမား ("Burma") ဟုသာ အသိအမှတ်ပြု သုံးစွဲခဲ့သည်[ကိုးကားချက်လိုသည်]။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက် နေ့မှစ ၍ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အဖြစ် ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်အလံကိုလည်း ယခင် နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစိုးရလက်ထက် ၂၀⁠၀၈ ခုနှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အလံဖြင့် အစားထိုး၍ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုခဲ့သည်။ 
၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် စစ်အစိုးရက အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဘားမားကို မြန်မာဟု ပြောင်းလဲရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းသည် အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်ခဲ့သည်[ကိုးကားချက်လိုသည်]။ ယေဘုယျအားဖြင့် မြန်မာသည် ၁၃၅မျိုးသော တိုင်းရင်းသားအားလုံး ကို ကိုယ်စားပြု၍ ဗမာ သည် ယင်း ၁၃၅ မျိုး အနက်မှ ဗမာလူမျိုးစု ကိုသာ ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤအမည်နာမကို လွန်ခဲ့သည့် ၁၂ ရာစုခန့်ကတည်းက သုံးစွဲလာခဲ့ကြသည်[ကိုးကားချက်လိုသည်]။ ဗမာမှာ လူများစုဗမာမျိုးနွယ်စု၏ ခေါ်ရာတွင် တရားဝင်ခေါ်သော အသုံးဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကျရောက်ခဲ့စဉ်က ဗမာကို အင်္ဂလိပ်အခေါ် ဘားမား (Burma) ဟုသုံးခဲ့ကြသည်။ စစ်အစိုးရက 'မြန်မာ'သည် 'ဗမာ'ထက် လူနည်းစုများအား ပိုမိုခြုံငုံမိသည့် အချက်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်စေလို၍ ဖြစ်သည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော အမည်နာမ မရှိခဲ့ချေ။ လက်ရှိအနေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗြိတိသျှကိုလိုနီအာဏာပိုင်များမှ ရှေးခေတ်ဗမာပြည်၏ အစိတ်အပိုင်း မည်သည့်အခါကမျှ မဖြစ်ခဲ့ဖူးသော အစွန်အဖျားဒေသ(ဗမာစကားမသုံးသော လူမျိုးများ နေထိုင်ရာဒေသ) များကိုထည့်သွင်းပြီး ဖန်တီးထားသောနယ်မြေဖြစ်သည်[ကိုးကားချက်လိုသည်]။
အနောက်နိုင်ငံများက စစ်အစိုးရကို လက်မခံသည့်အတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် နိုင်ငံအမည်အား တရားဝင်ပြောင်းလဲရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဟု ယူဆကြသည်[ကိုးကားချက်လိုသည်]။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် မြန်မာဘာသာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဟု လက်ခံသုံးစွဲသော်လည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဘားမားဟု ဆက်လက်သုံးစွဲလျှက်ရှိသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သုံးနှုန်းသည့်အခါ သုံးစွဲသူအလိုက် "ဘားမား"သို့မဟုတ် "မြန်မာ"ကို ရွေးချယ်သုံးစွဲကြပြီး နည်းပညာအားဖြင့် အပြန်အလှန် ဖလှယ်သုံးစွဲနိုင်သော စကားလုံးများ ဖြစ်ကြသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် အစိုးရအသစ်တက်လာပြီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်တွင်းအခြေစိုက် သံရုံးရှိ သံအမတ်ကြီးများ၊ စစ်သံမှူးများ နှင့် ကောင်စစ်ဝန်များကို နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံကာ မြန်မာ ဟုခေါ်ခေါ် ဗမာ ဟုခေါ်ခေါ် အရေးမကြီးကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်[ကိုးကားချက်လိုသည်]။
ဗမာ တို့သည် ၇ ရာစုနှစ်ခန့်မှစ၍ ယနေ့တိဗက်ဒေသမှ ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းတစ်လျှောက် ဆင်းသက်ခဲ့ကြသည်။ အေဒီ ၈၄၉ ခုနှစ်ခန့်တွင် ပုဂံကို ‌အခြေပြု၍ အင်အားတောင့်တင်းသည့် မင်းနေပြည်တော်တစ်ခုကို ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ အနော်ရထာမင်းတရားကြီး (၁၀၄၄ – ၁၀၇၇) နန်းတက်ခဲ့သည့်ကာလက ‌ဗမာလူမျိုးများ၏ ဩဇာမှာ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတစ်လွှားသက်ရောက်လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ၁⁠၁၀၀ ခုနှစ်တွင်မူ အရှေ့တောင်အာရှတိုက်၏ ဒေသအတော်များ⁠များကို ပုဂံမင်းနေပြည်တော်မှ ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းကို အများက ပထမမြန်မာအင်ပါယာအဖြစ်လက်ခံကြသည်။ ၁၂၀၀ ခုနှစ်အနှောင်းပိုင်းကာလတွင် ကူဗလိုင်ခန် ဦးဆောင်သော မွန်ဂိုတို့က ပုဂံနေပြည်တော်အား သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသည်။
↑ The 2014 Myanmar Population and Housing Census- The Union Report: Religion။ Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population MYANMAR။
↑ ACT Health Community Profile, pg. 1။ Multicultural Health Policy Unit။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ World Economic Outlook Database, October 2019။ International Monetary Fund။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၂ ၁၀.၃ ၁၀.၄ ၁၀.၅ ၁၀.၆ Background Note: Burma။ Bureau of East Asian and Pacific Affairs။ U.S. Department of State (August 2005)။ 2006-07-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Country Profile: Burma။ Foreign and Commonwealth Office။ 2003-07-31 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2006-07-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၇.၀ ၁၇.၁ ၁၇.၂ ၁၇.၃ Houtman, Gustaaf (1999). Mental Culture in Burmese Crisis Politics: Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy. ISBN 4-87297-748-3။
↑ Smith, Martin (1991). Burma -Insurgency and the Politics of Ethnicity. London and New Jersey: Zed Books, 42–43။
↑ ၂၁.၀ ၂၁.၁ Fink, Christina (2001). Living Silence:Burma under Military Rule. ISBN 1-85649-926-X။
↑ ၂၄.၀ ၂၄.၁ "The National Convention"၊ The Irrawaddy၊ 2004-03-31။ 2006-07-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၈.၀ ၂၈.၁ ၂၈.၂ ၂၈.၃ ၂၈.၄ ၂၈.၅ CIA Factbook
↑ ၃၀.၀ ၃၀.၁ ၃၀.၂ Than, Mya (2005). Myanmar in ASEAN: Regional Co-operation Experience. ISBN 981-230-210-7။
↑ ၃၁.၀ ၃၁.၁ Myanmar’s Forest Law and Rules။ BurmaLibrary.org။ 2006-07-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၆.၀ ၃၆.၁ Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments: Burma။ Central Intelligence Agency (2006-06-02)။ 2006-07-11 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar: 10th anniversary of military repression။ Amnesty International (1998-08-07)။ 2006-08-24 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2006-07-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Stephen Codrington (2005). Planet geography. Solid Star Press, 559။
↑ List of Least Developed Countries။ UN-OHRLLS (2005)။ 2012-05-30 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၅၈.၀ ၅၈.၁ Steinberg, David I. (2002). Burma: The State of Myanmar. Georgetown University Press, xi. ISBN 1-58901-285-2။
↑ ၅၉.၀ ၅၉.၁ Challenges to Democratization in Burma (PDF)။ International IDEA (November 2001)။ 2006-07-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Brown, Ian (2005). A Colonial Economy In Crisis. Routledge. ISBN 0-415-30580-2။
↑ Thailand: The Plight of Burmese Migrant Workers။ Amnesty International (2006-06-08)။ 2006-03-23 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2006-07-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆၇.၀ ၆၇.၁ Gordon၊ Raymond G., Jr. (2005)။ Languages of Myanmar။ SIL International။ 2006-07-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mya Than (1997). in Leo Suryadinata: Ethnic Chinese As Southeast Asians. ISBN။
↑ ၆၉.၀ ၆၉.၁ Gordon၊ Raymond G., Jr. (2005)။ Language Family Trees: Sino-Tibetan။ Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition။ SIL International။ 2006-07-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇၂.၀ ၇၂.၁ Tsaya (1886). Myam-ma, the home of the Burman. Calcutta: Thacker, Spink and Co., 36–37။
↑ (1998) in Robert I Rotberg: Burma: Prospects foraDemocratic Future။
↑ Temple, R.C. (1906). The Thirty-seven Nats-A Phase of Spirit-Worship prevailing in Burma။
↑ ၈၂.၀ ၈၂.၁ ၈၂.၂ Khin Myo Chit (1980). Flowers and Festivals Round the Burmese Year။
↑ ၈၃.၀ ၈၃.၁ Shway Yoe (1882). The Burman — His Life and Notions. New York: Norton Library 1963, 211–216,317–319။
↑ Scott O'Connor, V. C. (1904). The Silken East — A Record of Life and Travel in Burma. Scotland 1993: Kiscadale, 32။
↑ ၈၆.၀ ၈၆.၁ Kong, Foong Ling (2002). Food of Asia. Tuttle Publishing. ISBN။
↑ Saw Myat Yin (1990). Burma. M. Cavendish. ISBN ISBN။
↑ D. N. Jha (2004). The Myth of the Holy Cow. Verso. ISBN ISBN။
↑ Postcard of Saung Gauk (arched harp)။ National Music Museum။ University of South Dakota (2004-10-18)။ 2012-08-06 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2006-07-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉၃.၀ ၉၃.၁ ၉၃.၂ ၉၃.၃ ၉၃.၄ ၉၃.၅ Page - 8,7Days Daily Newspaper, 26.4.2020
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာနိုင်ငံ&oldid=513046" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဧပြီ ၂၀၂၀၊ ၀၇:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။